Hetsika ao Nepal, Andro faha-3: Baiko Hitifitra Raha Mahita · Global Voices teny Malagasy
Hetsika ao Nepal, Andro faha-3: Baiko Hitifitra Raha Mahita
Voadika ny 17 Oktobra 2018 6:38 GMT
(Fanamarihana! lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2006)
Manohy ny manosika ny tenany mankany any amin'ny zoro teritery kokoa ny mpanjakan'i Nepal. Nandingana ny dingana mialoha ny farany izy. Efa nametraka fotoana tsy ahazoana mivezivezy amin'ny alina nandritra ny roa andro misesy izy. Fa mazava fa lasa revilisiona izao ilay hetsika.
Manana tantara mahaliana izay ahitana tantara iray andraisan'ilay blaogera fototra anjara amin'ilay ”revolisiona” ny United We Blog . Fanavaozana mikasika ny Fikomiana Faobe, Andro III.
Satria mihatra ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, mandany fotoana be amin'ny fijerena fahitalavitra aho, toy ny maro hafa. Masa loharanom-baovao momba ny zava-mitranga ao amin'ny tanàna (hafa ankoatry ny mitazana ny manodidina ny tranoko avy aty ambony tafo) ireo vaovao amin'ny fahitalavitra……. Taorian'ilay famonoana, niatrika ny famoriambahoaka goavana indrindra i Pokhara taorian'ny nanoheran'ny vahoaka ilay famonoana……. Nambara ho faritra demokratika i Chitwan taorian'ny naneren'ny olona ny polisy mba hitsoaka teny an-toerana ary naka ny fifehezana tany amin'ny biraom-panjakana.
Ny Tantaran'i Kaushaltar, Tsy fivezivezena amin'ny alina! Fifanandrinana! Fanapahana ny Fifandraisana!
Tsy dia lehibe i Kaushaltar sy ny manodidina azy ary araka ny isan'ireo mpandray anjara eny an-toerana amin'ny fandaharanasa toy izany, milaza aho ankehitriny fa mitsangana ho an'ny revolisiona ny vahoaka.
Maka toerana marimpototra tsara ny Demokrasia Ho an'i Nepal. Baiko Hitifitra Vao Mahita: Lala-tampina Ho An'ny Mpanjaka, Hetsi-panoherana (sary), Antemiera Fandrafetana: Seza 300 Somary Mitovitovy araka ny isan'ny vahoaka, Heloka Bevava, Heloka Bevava Nasiam-panomanana Mialoha, Fampihorohoroana, Fampihorohoroan'ny Fanjakana, Mila Miato Tsy Manaraka Baiko Tsy Ara-dalàna Intsony Ny Polisy sy Ny Tafika. Miresaka momba ny parlemanta revolisionera ilay blaogy.
Hiasa eo ambanin'ny lalàm-panorenana vonjimaika ny Tranobe 1999 . Hanana fahefana revolisionera izy. Afaka hanambara ny firenena ho repoblika. Afaka hanadio ireo ambony galona ao amin'ny tafika. Afaka hanao zavatra toy izany. Afaka handefa i Kamal Thapa sy ny mpanjaka ho any am-ponja ohatra.
Manana fandrakofana tsara avy eny ifotony i Mero Sansar . Amin'ny teny nepaley ilay blaogy, ary izy irery no manao rakitsary avy amin'ny toerana misy ny zavamitranga. Feno karazany marobe